Kedu ka m ga-esi mara ma ekwentị m anaghị akwụ ụgwọ? Chọpụta ma ọ bụrụ na ị ga-ahapụ ya ma ọ bụ | Gam akporosis
Pablo Aparicio | | Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
¿Etu esi amata ma ekwentị m bụ n'efu? Inwe ekwentị efu na-enye anyị ohere iji ya na ndị ọrụ ọ bụla, mana anyị enweghị ike ịkwụ ụgwọ mgbe niile ụgwọ ekwentị efu n'onwe anyị na enweghị ụdị ego ọ bụla. Ihe a na-enwetakarị, ọ bụ ezie na a na-eme ihe pere mpe, bụ iwepụta ekwentị site na onye ọrụ ọ bụla, nke ga-eme ka anyị nwee adịgide adịgide ma anyị agaghị enwe ike iji ekwentị na onye ọrụ ọzọ ... belụsọ na anyị wepụtara ya. Ma olee otu anyi si mara ma ekwenti anyi n’efu ma o bughi?
Na nke a, anyị ga-anwa idozi obi abụọ gị niile, bido ịgwa gị ihe ị ga - eme iji chọpụta ma ị nwere ike iji ekwentị gị na onye ọrụ dị iche karịa nke nyere ya. Ọ bụrụ na ịnweghị ike, anyị ga-akuzikwa gị esi hapụ ya (karịa, gwa gị ebe) ma ọ bụrụ na anyị ga-atụfu nkwa ahụ n'ihi eziokwu nke ịhapụ ya.
1 Kedu ka m ga-esi mara ma ekwentị m dị n'efu?
2 Enwere ike ịmeghe ekwentị ahụ n'efu?
3 Kpọghe ekwentị Movistar
4 Mepee mobile na Vodafone
5 Mepee mobile na oroma
6 Etu esi emeghe ekwentị site na IMEI?
7 Ndi akwukwo ikike furu efu maka imeghe ekwenti?
Kedu ka m ga-esi mara ma ekwentị m dị n'efu?
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchọpụta kedu ka esi mara ma ekwentị m bụ n'efu ma ọ bụ naanị anyị nwere ike iji ya na onye ọrụ nke anyị si nweta ya, anyị nwere nhọrọ ndị a:
Thezọ kachasị mfe iji mara ma ekwentị anyị anaghị akwụ ụgwọ bụ, ogologo oge enwere ike, itinye a Kaadị SIM sitere na ndị ọrụ dị iche nke i nyere anyị mobile. Ọ bụrụ na ekwentị ahụ na-arụ ọrụ, ekwentị anyị bụ n'efu. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ ma anyị ejiri n’aka na kaadị SIM ahụ na-arụ ọrụ, ekwentị anyị anaghị akwụ ụgwọ.
Free gam akporo
E nwere ụzọ ọzọ ọzọ, nke bụ iji akara nke aka akara iji chọpụta. Dị ka ihe atụ nke ụfọdụ ụdị ndị ama ama na-eji gam akporo, ị nwere ihe ndị a:
Samsung koodu anyị nwere bụ: 7465625 #
Ọ bụrụ na mbụ nhọrọ pụta “Gbanyụọ”, Ekwentị anyị bụ n'efu. Ọ bụrụ na ịga n'ihu "NA", ekwentị anyị anaghị akwụ ụgwọ.
Koodu imeghe menu nzuzo nke ekwentị bu: * # * # 7378423 # * # *
Ihuenyo ga-apụta na ọtụtụ nhọrọ nke anyị ga - ahọrọ "Ozi ọrụ" wee "Nhazi"
Ka anyị na njedebe, ebe ngalaba “Ọnọdụ mgbọrọgwụ”. Ọ bụrụ na ị kwuo "Ee", a ga-ahapụ gị. "Mba" pụtara na ọ bụghị.
Ka anyị gaa Ntọala / Banyere ekwentị /Ozi ngwanrọ.
Ọ bụrụ na ụdị dị na "Software Software" na-agwụ na "-EUR-XX”Ọ bụ na ọ bụ n'efu.
Ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ otu esi amata ma ọ bụrụ na ekwentị m bụ n'efu ma ọ sitere na akara Huawei, koodu nke ekwentị Huawei bụ: * # * # 2846579 # * # *
Anyị na-enweta Nchịkọta Ọrụ / Ntọala Ntọala /Kaadị mkpọchi steeti SIM.
Ọ B IFR it na ọ na-ekwu «Sim kaadị mkpọchi ala NW_LOCKED»Ọ bụ na ọ bụghị n'efu.
Enwere ike ịmeghe ekwentị ahụ n'efu?
Ee. Dị ka anyị na-akọwa mgbe e mesịrị, ọ bụrụ na ekwentị anyị adịghịzi adịgide, anyị nwere ike ịkpọ onye ọrụ ahụ ma ha ga-enye anyị koodu mmeghe n'efu na enweghị iguzogide ụdị nguzogide ọ bụla (n'eziokwu, Movistar na-eme ya na enweghị adịgide) N'okwu kachasị njọ, anyị ga-eme ụfọdụ paripé ma gwa ha na a ga-eji ekwentị na kaadị akwụ ụgwọ ma ọ bụ ihe ọ bụla na-abata n'uche. O nwekwara ike ịbụ na ha na-achọ ire anyị ụfọdụ ụdị nkwekọrịta, mana nke a bụ ihe ha na-eme mgbe ọ bụla anyị kpọrọ ma ọ bụ kpọọ ụlọ ọrụ ụdị a na naanị anyị ga-esi ọnwụ na ihe ha na-achọ ire anyị enweghị mmasị anyị.
Ọ bụrụ na nke ahụ dị n’elu abụghị nhọrọ, anyị nwere ike ịnwale ngwa dịka nke ị nwere n’okpuru. Ndị a ngwa Ha anaghị arụ ọrụ ebube, mana ọ dị ka ọ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ abụọ, yabụ na anaghị atụfu ihe ọ bụla site n'ịgbalị. Gịnị a ngwa na-eme bụ inye anyị Kpọghe koodu na anyị ga-anwale ịhụ ma ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, anyị nwere ike ịnwale usoro m na-eweta ma emechaa.
Kpọghe ekwentị Movistar
Dị ka anyị na-agụ na nkwado na peeji nke Movistar, onye na-acha anụnụ anụnụ «Na-akwụghị ụgwọ ndị ahịa niile ọnụahịa Movistar mkpanaka ha na-ebu SIMLOCK. Ugbu a kwa ka ahịa na-adịgide adịgide (jikọtara na ọnụ ha) ». Ọ bụrụ na m ga-eme ihe n'eziokwu, nke ikpeazụ a juru m anya ma mee ka m nyochaa ihe edere na post a. Kpọghee ekwt a Movistar ekwentị anyị ga-eme ndị na-esonụ:
Anyị na-akpọ 1004 ma rịọ koodu mmeghe.
Mgbe ha jụrụ anyị maka IMEI nke ọnụ, anyị na-enye ya ya. Na nke a, ị nwere ozi na-akọwa ka esi achọpụta IMEI nke ekwentị.
N'ikpeazụ, anyị na-abanye koodu ha nyere anyị. Dị ka akọwara na weebụsaịtị ha, enwere ike ịnwale koodu ahụ oge 10 na-enweghị igbochi akụrụngwa ahụ. Mgbe mgbalị 10 gasịrị, ọnụ ahụ na-adabere.
Mepee mobile na Vodafone
Vodafone Ọ na-ewepụta ekwentị mkpanaaka n'efu mana, n'adịghị ka Movistar, ọ ga-abụ naanị ekwentị ndị anaghị akwụ ụgwọ na-adịgide adịgide. Requestrịọ Kpọghe koodu maka a Vodafone ọnụ, anyị ga-eme ndị na-esonụ:
Anyị na-enweta ọrụ vodafone m na weebụsaịtị ya ma ọ bụ site na www.vodafone.es/mivodafone.
N'ime ọrụ ahụ, anyị ga-ahọrọ ahịrị ekwentị anyị chọrọ ịhapụ.
Pịa na taabụ Ekwentị m Na ee ma anyị họrọ Ekwentị m.
Na okpuru peeji a bu nhọrọ imeghe ekwenti. N'akụkụ a, anyị tinye IMEI na adreesị ozi-e ebe anyị ga-enweta koodu ahụ. N'ime awa 48 ha ga-ezitere anyị koodu mkpọghe na ntuziaka ka anyị tinye ya na ekwentị anyị.
Anyị tinye koodu ma kpọghee ya.
Mepee mobile na oroma
Ejighi m n'aka ma Orange hapụ ekwentị n'efu, naanị ihe m ga-ekwu bụ na ha nwere peeji dị (dị Ebe a) ịrịọ maka mmeghe nke ọnụ ya. Anyị nwekwara ike ịkpọ 1470 (ndị mmadụ n'otu n'otu) ma ọ bụ 1471 (ụlọ ọrụ) ma jụọ maka Kpọghe koodu.
Etu esi emeghe ekwentị site na IMEI?
Unlock a mobile maka IMEI Ọ bụ otu ihe ahụ, agbanyeghị ụdị akara ngwaọrụ anyị. N'ụzọ ezi uche, nzọụkwụ mbụ ga-abụ ịmata ihe IMEI nke ekwentị anyị chọrọ unlock kpọghee ekwt bụ na nke a bụ ihe anyị nwere ike ime na ụzọ dị iche iche:
Thatzọ ọ ga - arụ ọrụ na ekwentị ọ bụla na ọ bụ ya mere m ji kwuo nke mbụ bụ nke Koodu 06. Iji mee nke a, anyị ga-eso usoro ndị a:
Anyị na-emeghe ngwa Ekwentị.
Ọ bụrụ na anyị enwetaghị ya ozugbo, anyị na-emetụ nhọrọ ga-akpọrọ anyị na Keyboard, anyị pịnyere * # 06 #. Nọmba IMEI ahụ ga-egosi na ihuenyo.
Iji pụọ, anyị na-emetụ OK, Nabata ma ọ bụ ederede anyị tinyere na ụdị mkpanaka anyị.
Site na ntọala ekwentị. Wayzọ ọzọ ịchọta nọmba IMEI bụ site na ịchọ ya na ntọala ekwentị, na ngalaba ozi ebe anyị ga-ahụ ụdị gam akporo na ọtụtụ data ndị ọzọ site na ọnụ anyị.
Na-ele anya n’ime igbe. Easyzọ ọzọ dị mfe iji chọpụta IMEI nke ekwentị anyị bụ ilele igbe ahụ. Ọ na-adịkarị na azụ, ebe ụdị ngwaọrụ ahụ dị, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịnwe ekwentị nke igbe ya anaghị enye ụdị ozi a.
Ugbu a anyị matara ihe IMEI nke ọdụ anyị bụ, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ, mana 2 kachasị eji ma rụọ ọrụ:
Ị nwere ike kpọghee ekwenti na njikọ ahụ anyị hapụrụ gị
Ọ bụrụ na ekwentị anyị anaghịzi adịgide adịgide, ihe kachasị mma bụ kpọọ onye ọrụ ma rịọ maka koodu iji hapụ ya. Nke a bụ ihe nwanne m nwoke mere izu ole na ole gara aga, na nke a ọ mere ya na mkpanaka 2008. Anyị na-agwa onye ọrụ ụdị ihe atụ nke mkpanaka anyị nwere na IMEI ya na na sekọnd ha ga-agwa anyị koodu mmeghe na ntuziaka maka iwebata ya.
Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịrịọ koodu ahụ n'aka onye ọrụ anyị, Androidsis na-arụkọ ọrụ DọkịtaSIM iji nye gị ọrụ ọsọsọ na ntụkwasị obi nke ị nwere ike ịmeghe ihe ọ bụla ekwentị mkpanaaka. Naanị ihe anyị ga-eme bụ:
Tinye websaịtị ka free mobile
Kama ịgwa onye ọrụ ahụ IMEI, anyị ga-agwa DoctorSIM.
Anyị na-edozi ma kwụọ ụgwọ maka ọrụ mmeghe site na weebụsaịtị gị.
Anyị na-echere ịnata koodu ahụ.
Anyị na-etinye kaadị SIM site na onye ọrụ ọzọ na ekwentị anyị
N'ikpeazụ, anyị tinye Kpọghe koodu na-anabata.
Mụtalarị kedu ka esi mara ma ekwentị m bụ n'efu na kwa, ọ bụrụ na ejikọtara ya na ụlọ ọrụ gị, ị hụla otu esi hapụ ya kpamkpam n'efu ma ọ bụ site na iji ọrụ ndị ọzọ.
Ndi akwukwo ikike furu efu maka imeghe ekwenti?
Kpọghe ekwentị iji jiri ụlọ ọrụ ọzọ, iwu ma ọ bụ iwu akwadoghị?
Okwu banyere nkwa dị aghụghọ mgbe niile. Ọ bụrụ na anyị nwere ekwentị mkpanaaka jikọtara na ụlọ ọrụ, anyị nwere ike ịhapụ ya naanị na nhọrọ abụọ: mgbe anyị ka ga-adịgide adịgide ma ọ bụ mgbe anyị enweghịzi ya. Ọ bụrụ na anyị enweghịzị adịgide adịgide, ọrụ dịịrị onye ọrụ inye anyị koodu mkpọghe n'efu, yabụ anyị agaghị atụfu nkwa ahụ n'okpuru echiche ọ bụla. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na anyị enwekwaghị oge ma ọ bụrụ ọnwa 24, anyị agaghịzi enwe oge mkpuchi.
Nsogbu nwere ike ibia ọ bụrụ na anyị ahapụ ekwentị nke ka ga-adịgide adịgide. Onye ọrụ ahụ agaghị achọ ịma na anyị ahapụla ekwentị "ya" iji ya na ụlọ ọrụ ọzọ nke, n'eziokwu, ọ bụ ya mere anyị ji hapụ ya, ọ dị mma? N'ụzọ iwu, akpọghe ekwentị adịghị ka Mgbọrọgwụ ya ma ọ bụ gbanwee ROM, ya bụ, anyị anaghị eme mgbanwe sọftụwia ọ bụla nwere ike imebi iguzosi ike n'ezi ihe ya, yabụ ekwesịrị ịdebe akwụkwọ ikike ahụ. N'ezie, dịka o kwesịrị ịdị were ya nye onye ọrụ ya ka ọ rụzie ya, ọ kachasị mma ịghara ikwu ihe ọ bụla na anyị wepụtara ya ma ọ bụrụ na ha ajụghị anyị, ọ bụrụ na ha anaraghị ya, bido usoro ka ha wee rụọ mmezi na-eche na-edozi nsogbu anyị.
You chọpụtala ma ekwentị gị anaghị akwụ ụgwọ ma ị nwere ike iji ya na onye ọrụ ọzọ? Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara esi mara ma ọ bụrụ na ekwentị mkpanaaka bụ n'efu ma ọ bụ, hapụ anyị a ikwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Etu esi amata ma ekwentị m bụ n'efu
Usoro anaghị arụ ọrụ na Samsung
Zaghachi na Nacho Balaguera C.
Ndo, mana site na Iwu (na Spain) ekwentị niile ndị na-ere ahịa na-ere ga-abịa n'efu na n'ọnọdụ ha na-akpọchi, ntọhapụ ha bụ n'efu. Na ruo ugbu a ha emebeghị ya na ụfọdụ chọrọ itinye nrite ahụ na anyị dị mma bụ ihe ọzọ, mana ndị ọrụ dịka Galician R na-erekarị ha n'efu na nnabata iwu dị ugbu a.
Ọ bụrụ n'inwee ajụjụ ọ bụla na nke a, chọọ FACUA n'ime igwe nchọta kachasị amasị gị ma ha ga-akọwa etu usoro a si dị.
Nwoke Mirel dijo
Kpachara anya, Bootloader enweghị ihe ọ bụla gbasara ma ewepụtara ya, gbanye ya anaghị ahapụ ya. Gbanwe rom ma (ma ọ bụrụ na ọ na-gbanwere merụsịrị ị nwere ike hapụ IMEI) Ọ na-tọhapụrụ site na ụlọ ọrụ x IMEI ma ọ bụ na a anwansi igbe
Zaghachi Mirel Man
usoro maka samsung bu Muuuuuuuuuuuy ochie, nke a bu ihe eji na ekwentị site na 2005 rue mgbe emesiri, usoro a adighi aru oru na Galaxy S1
Zaghachi Ronald Leiva (Motursa)
Ọ dị ezigbo mma, ọ bụ eziokwu, ugbu a enwere iwu dị ugbu a nke ga-eresị ekwentị ndị ahapụpụtara mana ndị rere tupu iwu ahụ abụghị, na koodu ahụ na-arụ ọrụ maka m na m nwetara menu akọwapụtara na ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ịmee enyefe akwụkwọ dị ka ekwentị ahụ bụ nke gị, anaghị ahapụ ya n'ihi ihe egwu nwere ike zuo ohi
Kedu usoro ziri ezi maka Samsung maka S5 ??? Nke a bipụtara anaghị arụ ọrụ m ma ọlị
Ya mere amaara m ma ọ bụ na ha amaghị ihe ha na-agwa gị ebe a n'ihi na otu, mgbe ị hụrụ nke a wee gụọ ihe ndị a kwuru, ha na-edozi gị n'ihi na ụfọdụ na-ekwu na anaghị m ekwu eziokwu na n'otu peeji ahụ ha na-agwa gị ma ọ bụrụ na enwere onwe gị ma ọ bụ na ọ bụghị, ha na-akọwa iji mara ma ikwere ma ọ bụ na ọ bụghị biko
Maka na ị nwere ike itinye sim ọzọ site na ụlọ ọrụ ọzọ
Hey, Samsung koodu anaghị arụ ọrụ ọ dịghị ụzọ ọzọ ịmara iji mara ma ewepụtara ya
Ndewo, achọrọ m ịma ma ekwentị LG VS810PP enwere ike ịhapụ ya iji ya na ụlọ ọrụ Telcel
ma ọ bụrụ na ọ na-ekwu na a Huawei »SIM agbachi, biko-agwa gị na!» ?? n'ihi na enweghị m ike ịkpọ ma ọ bụ nata, mana ọ bụrụ na m jiri 4g
You ma na App gafere nbudata 5.000 nde?
Ngwaọrụ kacha ọhụrụ gam akporo kacha ọhụrụ [July 2017]